Udlame ePhalamende lase-Afrika | Scrolla Izindaba
Udlame ePhalamende lase-Afrika
A session of the African Union's parliament slid into chaos as lawmakers tussled over a ballot box, aimed kicks and shouted amid a dispute over electing the AU's next president pic.twitter.com/ONZ7K1jhQC
Kuqubuke udlame ngesikhathi kunePhalamende le-Pan-African (PAP) ngoLwesibili, kulandela ingxabano mayelana nendlela okuvotwa ngayo.
I-PAP bekufanele ikhethe ubuholi obusha. Kodwa-ke, incwadi ethunyelwe ephalamende ivela ku-African Union iphonse inselelo kwinqubo yokulungiswa kokuvota yamisa inqubo.
Ithimba laseNingizimu ne-Afrika linqabile ukuqhubeka nokuvota njengoba befuna ubumengameli obujikelezayo. Izithunywa zaseNtshonalanga naseMpumalanga ye-Afrika zifuna ukuthi inqubo yokuvota iqhubeke.
Ubuholi bamanje be-PAP buholwa ihhovisi elibandakanya umengameli kanye namaphini kamengameli amane ngamunye amele isifunda sendawo.
Kodwa-ke, isiphithiphithi sesibangelwe yizizwe eziseNingizimu ne-Afrika ezifuna ushintsho kule ndlela. Bakholelwa ekutheni ubuholi kufanele bube kumgomo wokujikeleza, ofana nowe-African Union noma ubuholi buvotelwe ngevoti.
NgoMsombuluko kwenzeke udlame ngalesi sinqumo, amalungu amaningi ephalamende abonakale ephonsa izihlalo namatafula. UDiibril War, omele i-Senegal ukhahlele omele iNingizimu Afrika, uPemmy Majondina ngesikhathi kunombango.
UMajondina ubelokhu esho ukuthi uzovula icala lokushaya emaphoyiseni.
Udlame belulokhu luyisihloko se-PAP njengoba uJulius Malema ezwakale ngesonto eledlule esabisa ngokubulala ilungu lephalamende: “Ngizokubulala uma sesingaphandle, ngizokubulala. Awungazi kahle,” kubika i-Scrolla.Africa mhla zingama-28 kuNhlaba.
Uphiko lwabesifazane lwe-ANC namuhla lucele ukuthi i-PAP ithathe izinyathelo kunoma ngubani onecala lokuhlukumeza ngokobulili. Babhale lesi sehlakalo esenzeke phakathi kukaMajondina noWar ‘njengento engesiyona ubu-Afrika’ futhi badinga ukunakekelwa ngohlobo oluthile lwegunya.
Iseshini yePhalamende yaqala mhla zingama-21 kuNhlaba kanti izoqhubeka kuze kube ngumhla zizi-4 kuNhlangulana lapho kukhethwa ubuholi obusha okuyinjongo eyinhloko.
Umthombo wesithombe: @TimesLIVE